Warshadda ilkaha ee Shiinaha iyo alaableyda | Donghua
Iyada oo leh iska caabin kuleyl sare, xoog saameyn saameyn leh, ka hortagga ceeryaanta iyo heerka sare ee muuqaalka madadaalada, xaashiyaha loo yaqaan 'DHUA polycarbonat sheet' ayaa ah xulashada ugu habboon ee gaashaanka ilkaha gaashaanka. Mashiinka muraayadaha Polycarbonate-ka wuxuu siiyaa dusha muraayadaha muraayadaha kormeerka, muraayadaha xiirista / qubeyska, muraayadaha qurxinta iyo ilkaha si loo kordhiyo muuqaalka.
Muraayadda ilkaha / Afka
Muraayadda ilkaha, ama afka waa muraayad yar, oo inta badan wareegsan, la qaadan karo oo leh gacan qabasho. Waxay u oggolaaneysaa xirfadlaha inuu baaro gudaha gudaha afka iyo dhinaca dambe ee ilkaha.
Difaaca wajiga ilkaha
Dhua waxay siisaa gaashaan wajiga ka sameysan PET aad u cad ama xaashida polycarbonate oo leh daaweyn ka hortag ah ceeryaanta labada dhinac. Waxaan u goyn karnaa qaabka aad u baahan tahay. Gashaantida wejigaan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sidii gaashaanka wajiga ilkaha si looga fogaado buufin, dukhsiyado iyo waxyaabo kale oo wasakh ah inta lagu jiro baaritaanka.
Baakadaha leh Muraayadda looxa